Zoma, Aogositra 24, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Matetika tiako ny hevitry ny Chief Revenue Officer iray izay nampifanaraka ny varotra sy ny varotra ho lasa departemanta tokana sy miray hina. Na dia mino aza aho fa mbola manana fahamendrehana, ny Lehiben'ny Teknolojian'ny varotra marketing dia mety mahaliana koa. Rehefa miara-miasa amin'ny orinasa lehibe maro izahay, misy fifandraisana mivantana eo amin'ny tsy fahafahan'ny orinasa mandray haingana ireo metodôlôjia vaovao ary mitazona ny fahaizany mamorona sy ny sampan-draharahan'ny teknolojia. Ny tsy fitoviana dia eo amin'ny risika sy valisoa. Mitantana risika ny sampana IT. Ny departemanta marketing dia mitantana valisoa.
Ity anjara asan'ny Lehiben'ny Teknolojian'ny varotra marketing dia nosoratan'i Blue Kai. Na dia tsy azoko antoka aza fa misy olona manana ny anaram-boninahitra tena izy, dia azo antoka fa be ny mpitantana marketing izay manao satroka roa. Amin'ny alàlan'ny fiantohana fa tompon'andraikitra amin'ny risika sy valisoa ny olona tokana dia manana olona iray mihetsika haingana araka izay azo atao ianao ary manome toky fa azo antoka sy azo antoka ny teknolojia.
Ny lakilen'ny fijerin'ny infographic dia hoe automation marketing dia mitaky ampahany betsaka amin'ny fandaniana IT ary tompon'andraikitra amin'ny vola miditra lehibe sy lehibe kokoa. Noho izany dia mitaky loharano manokana iray izay mahatakatra ny fomba fisafidianana ny teknolojia marketing.
Tags: lehiben'ny teknolojia marketing
25 Aogositra 2012 à 6:36
Heveriko fa marina ianao amin'ny vola, Douglas. Adinontsika indraindray fa ny ampahany "fampahalalam-baovao" amin'ny "Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao" dia natao ho an'ny tanjona ara-barotra — mba hahazoana fahombiazana ary, amin'ny farany, hivarotra vokatra sy serivisy bebe kokoa. Manjavozavo ny andalana ary mila mifanaraka fotsiny isika rehetra. 😉
26 Aogositra 2012 à 11:36
Ny CMTO dia toa mitovy amin'ny mpijirika fitomboana manana andraikitra midadasika kokoa amin'ny marika, ny fandefasana hafatra ary ny fitantanana (mihevitra fa ny fitomboana no tena ifantohan'ny varotra). Manontany tena aho hoe hatraiza ny fihetsehan'ny CMTO ary raha mandray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny angona izy ireo. Nahita CMOs lehibe maro aho izay milaza ny varotra entin'ny angon-drakitra saingy mbola mifantoka amin'ny metrika zava-poana ary tsy mahafantatra ny iray amin'ireo mpitarika lehibe amin'ny fitomboana.
31 Aogositra 2012 à 9:15
Handbags izay noforonin'ny mpamorona malaza dia tena maka fanahy
vehivavy amin'izao andro izao.
Ny fananana kitapo izay ananan'ny olo-malaza malaza dia azo antoka fa mahatsapa ny vehivavy iray
Ny vehivavy dia mahita fa tsy azo toherina ny mijery stylish sy sexy.
Malaza amin'ny endrika kanto izy ireo.